Adeegyada Xulista Goobta ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kobcinta Dhaqaalaha|Horumarinta Ganacsiga
Shaqo qorista, Haynta iyo Balaadhinta Ganacsiga
In kasta oo dhisida ganacsiyada si dabiici ah ay qayb muhiim ah ka tahay istiraatiijiyadda dhaqaalaha ee Wasaaradda Ganacsiga, kooxdeena ayaa sidoo kale diiradda saareysa soo jiidashada ganacsiyada cusub iyo maalgashiga gobolka iyada oo loo marayo ballaarinta ama dib u dejinta howlaha. Mas'uuliyadani waxay saaran tahay kooxda Horumarinta Ganacsiga ee ku dhex jirta Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartan. Waxaa loo xilsaaray inay fuliyaan shaqaaleyn firfircoon, haynta iyo istiraatiijiyadda ballaarinta, la shaqeynta go'aan qaadayaasha ganacsiga iyo xulashada bogagga adduunka oo dhan si loo helo fursado ballaarin iyo maalgashi cusub, abuurista iskaashiyo ganacsi oo cusub oo bulshada dhexdeeda ah, ka qaadista isbaarooyinka iyo keenista ganacsiyo cusub iyo fursado shaqo bulshooyinka. gobolka oo dhan.
Haddii aad tahay xulista goobta ama ganacsiga u fiirsanaya Gobolka Washington ballaarin ama dib u dejin oo aad u baahan tahay macluumaad ku saabsan gobolka ama xulashada goobtayada iyo adeegyada maalgashiga, oo ay ku jiraan aaladeena cusub ee guryaha lagu raadinayo XuloWashington.com.
Ma waxaad dooneysaa inaad maal gashato ama ganacsi ku sameyso Washington? Booqasho...
Cusboonaysiinta Horumarinta Ganacsiga
Iyada oo diirada la saaray dib-u-qorista iyo maalgashiga, Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka ayaa mashquul ku ahaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Laga soo bilaabo 2013, kooxda Horumarinta Ganacsiga ee OEDC, oo kaashanaysa hay'adaha horumarinta dhaqaalaha ee gobolka oo dhan, waxay soo jiiteen ama hayeen 135 mashruuc, iyagoo abuuray qiyaastii 14,297 shaqo.
Boqolkiiba Soddon iyo lix ka mid ah guulaha shaqaalayntu waxay ku jireen aerospace, waxaana ku xigay wax soo saarka beeraha / cuntada (12.1%) iyo teknolojiyadda macluumaadka iyo isgaarsiinta (10.3%), boqolkiiba konton iyo kow mashruucyadani waxay ku yaalliin ama la dejiyay meelaha miyiga ah ee gobolka.
IPZ cusub oo loogu talagalay
Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa soo magacawday mid cusub Aagga Iskaashiga Innovation (IPZs) waxayna dib u fasaxday labo kale si ay gacan uga geystaan ​​kobcinta dhaqaalaha gobolka ee qeybaha warshadaha muhiimka ah. Tiknoolajiyadda Dhexe Washington ee Falanqaynta Xogta IPZ waxay noqotay aagga Iskaashiga Hal-abuurka 14aad. Waxay ku saleysan tahay Wenatchee.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan aagagga shuraako.
Guul xusid mudan ....
Xarunta weyn ee Isbitaalka Banfield Shirkadda daryeelka xayawaanka ee Global ayaa xarunteedii u wareejisay Vancouver, Washington. Shaqooyinka: 100, Qiyaasta Kharashaadka Raasumaalka: $ 67 milyan.
United Qaybinta Cuntada Dabiiciga ah: Waxay ku taal Ridgefield, Washington. Shaqooyinka: 200, Qiyaasta Kharashka Raasumaalka $ 53 milyan.
Xarunta Horumarinta Teknolojiyada Ugu Fiican: Waxay ku taal Seattle, Washington. Qiyaasta Kharashka Raasumaalka: $ 4.2 milyan.
Warshadaha Maruichi: Qorshayaal la shaaciyay oo ku kacaya $ 30 milyan oo biraha warshad dhismeedka aagga Vancouver ah. Shaqooyinka: 25.
Xarunta Golaha Hawada ee GKN magaalada Sumner, Washington. Shaqooyinka 75. Qiyaasta Kharashaadka Raasumaalka: $ 10 milyan.
Guudmarka Gobolka Washington
Guji si aad u eegto khadka tooska ah
Qaybta Maalgashiga Washington
La xiriir kooxda Horumarinta Ganacsiga ee Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Tartanka 206-256-6100.
Ama booqo XuloWashington.com si aad wax badan uga barato fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Gobolka Washington.
Ma waxaad dooneysaa tababar shaqo?
Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington, Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha iyo Xafiiska Tartanka ee magaalada hoose ee Seattle waxay si isdaba joog ah u qortaa layliyo mutadawiciin ah. Waxaan codsaneynaa in layliyuhu tabaruce 10-20 saacadood usbuucii, ugu yaraan muddo 3 bilood ah. Si aad wax dheeraad ah uga ogaato, u tag annaga Bogga Codsiga Tababarka.